Soomaali sharci-darro ku joogtay Kenya oo la soo masaafurinayo – idalenews.com
Taliyaha Guud ee Boliska dalka Kenya, David Kimaiyo, ayaa shaaciyey in la soo masaafurin doono Soomaali lagu soo qabtay Hawlgalkii ka dhacay Degmadda Gariisa ee W/bari ee Kenya.
Taliyaha ayaa sheegay in Soomalidaasi loo gudbinayo Maxkamadda, si dacwado loogu soo oogo, wuxuuna tilmaamay iun dadkaasi lagu celin doono dalka Somalia, marka ay Maxkamadda xukunto.
Taliyaha waxa kaloo uu tilmaamay inay sii wadi doonaan Hawlgalka baaritaanka ee ka socda Garissa, isagoo Milkiilayaasha Hoteelladda ugu baaqay inaysan dadka aan sharciga lahayn ka kireynin Hoteelladda.
Dhinaca kale, Taliyaha Boliska ee Garissa, Charlton Mureithi ayaa xaqiijiyey inay ugu yaraan 30-qof ku soo qabteen Hawlgalka lagu sugayo Ammaanka Garissa, isagoo xusay inay dadkaasi sharci-darro ku joogeen Garissa.
Si kastaba ha ahaatee, Dowladda cusub ee Kenya ayaa sheegtay inay abaalmarin lacageed guddoonsiin doonaan dadkii soo sheega Maclumaad horseedi kara in la soo qabto kuwa ka dambeeya dilalka iyo ammaan-xumida ka taagan Garissa.
Dowladda ayaa ku yaboohday abaalmarin dhan 600 ilaa 1,200 Dollar oo la siinayo dadka keena wararka horseedi karta inay Ciiddamadda Ammaanka soo qabtaan Dembiilayaasha ka dambeeya dilalka iyo ammaan-xumidda.
Germany oo ku baaqday in la sii wado Tababarka Ciiddamadda Dowladda Somalia